Sheekh Abuu Muscab oo war cusub kasoo saaray weeraradii ka dhacay Bariire iyo Awdheegle.
Askar lagu dilay Baydhabo iyo Ergay lagu beegsaday degmada Beled Xaawo.
Xoogag Jihaadi ah oo sarkaal sare ku dilay duleedka degmada Xudur.
Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay duleedka degmada Kismaayo.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo madaxda maamullada ku amray in aysan Muqdisho ka bixi karin.
Askar lagu dilay degmada Kaxda iyo weerar ka dhacay Garoonka Dhuusamareeb.
Xoogag Jihaadi ah oo la wareegay gacan ku heynta degmada Mahadaay Sh/dhexe.